DQ PACK - Flexible packaging inogadzira uye yakatarisana neindasitiri yekudhinda kwemakore anopfuura 31. Tel: +86-18125839585 E-mail:dqpack@danqing.net
Simuka Spout Pouch
Simuka Zipper Pouch
Simuka Perforated Homwe Yemuto
Kraft Simuka Chikwama
Akadhindwa Packaging Mafirimu
Yakakwira Barrier Firimu MuRoll Form
Peti Twist Film For Candy
Yakadhindwa Packaging Firimu Roll
Chikafu Giredhi Firimu
Pp,pvc,pet,ipairika Cupsealing Firimu
Packaging Pouch By Indasitiri
Kofi/tii Packaging Bags
Cosmetic Packaging Mabhegi
Kurongedza Mabhegi ECandy Biscuit Ice Cream
Kofi & Tea Packaging
Cosmetic & Personal Care Zvigadzirwa Packaging
DQ PACK-FLEXIBLE PACKAGING MANUFACTURER KUBVA 1991
Customization Service yekusimuka mapochi uye mabhegi ekurongedza chikafu
SIMUKA POUCH NE SPOUT
Spout pouch ine zvakanakira kusimba kwemhepo, hunyoro humbowo uye hapana kuvuza. Inogona kunyatso kudzivirira chiedza uye kuwedzera nguva yekupera kwezvigadzirwa.
SIMUKA POUCH NEZIPPER
DQ PACK ine 6 otomatiki yekurongedza uye mitsara yekudhinda, 4 yepamusoro-yepamusoro-kumhanya-yekunyungudika-isina lamination mitsetse. Yedu yese yekugadzira maitiro inoitwa zvinoenderana nezvinodiwa zve ISO9001-2018 BRC.
Somutungamiriflexible packaging mugadziri, chikafu chekurongedza mabhegi mugadziri, uye simudza pouch supplier, DQ Pack iri kutarisa nezve indasitiri yekudhinda kubvira 1991.
Yedu yese yekugadzira maitiro inoitwa zvinoenderana nezvinodiwa zve ISO9001-2018.Uye zita redu rekutengesa "DQ Pack CN" rave zita rinozivikanwa rechiratidzo rinochengetedza chinzvimbo chinotungamira mukati memisika yemumba yemalaminated flexible packaging uye minda yekudhinda.
Iwo anochinjika mabhegi ekurongedza anoshandiswa zvakanyanya kune kofi& kurongedza tii, kurongedza chikafu, muto chinwiwa kurongedza, pet chikafu kurongedza, nezvimwe.
Chikafu zipper bag
Yedu Customization - Nyanzvi& Efficient
Isu takapa OEM&ODM inogadzira mabhegi ekurongedza chikafu uye inochinjika sevhisi yekurongedza kwemakore makumi maviri nemashanu. Hazvina mhosva kuti zvaunoda ndezvipi, ruzivo rwedu rwakakura uye ruzivo runokuvimbisa mhedzisiro inogutsa. Isu tinoisa simba redu rakawanda kuti tipe mhando yakanaka, sevhisi inogutsikana, mutengo wemakwikwi, kuendesa nenguva kune vatengi vedu vanokoshesa. Isu tinokwanisa kuita iwo akaoma ehumbowo ruvara uye ekupedzisira kudhinda zvigadzirwa ruvara ruenderane kupfuura 98%. Kana uri kutsvaga tsika chikafu kurongedza mabhegi vagadziri, simuka mugadziri wehomwe kana flexible packaging mugadziri, kugamuchirwa kuti ubate DQ PACK.
Kugadzira kana kutengesa zvinhu zvakanaka kana masevhisi ari kutengeswa
Muedzo Production& Sample Confirmation
Isu tinovavarira kunzwisisa zvaunoda zvakakwana kuti uderedze njodzi yeprojekiti
ku Basa uye Tsigiro
DQ Pack inombundira huzivi hwayo "kupa mabhenefiti kuvashandi, kutora mutoro kune nzanga", ichivavarira kuedza kuve akanakisa.
shamwari kubva kumusika wemuno kune vatengi vepasirese uye vatengesi.
Inovhara nzvimbo yese yepasi inogona kushandiswa ye35,000 square metres uye inouya yakashongedzerwa ne6 otomatiki yekurongedza uye mitsara yekudhinda, 4 yepamusoro-yepamusoro-yekumhanya-isina mitsara yekumisikidza.
DQ PACK yakasimbiswa neBV, FDA, SGS uye GMC, pamwe ne ISO9001-2018 quality management system.
Isu tinopa imwe-yekumira sevhisi yekubatanidza dhizaini, kuyerwa, kugadzira, kutumira, kuisirwa, uye mushure mekutengesa sevhisi.
Iyo yekumisikidza mitemo yeyakaomesesa yekugadzira maitiro, 18 miriyoni maodha kubva kune dzimwe nyika.
DQ PACK yakatanga kuzvipira kwayo kupa zvigadziriso zvinochinjika zvekurongedza nekudhinda muna 1991. Kubva kuGuangdong Province, kambani yedu ine vashandi vanopfuura mazana maviri vane 30,000 square metres yezvivakwa muDongshanhu Industrial Park.
Wedu yekugadzira wekishopu inovhara yakazara inogona kushandiswa pasi nzvimbo ye35,000 square metres uye inouya yakashongedzerwa 6 otomatiki yekurongedza uye mitsara yekudhinda, 4 yepamusoro-yepamusoro-yekumhanya-isina lamination mitsara. Yedu yese yekugadzira maitiro inoitwa zvinoenderana nezvinodiwa zveISO9001-2018 ..., uye mucherechedzo wedu "DQ PACK CN" rave rinozivikanwa zita rechiratidzo rinochengetedza nzvimbo inotungamira mukati memisika yemumba yemalaminated flexible packaging uye minda yekudhinda. Sekambani inotungamira inochinjika yekurongedza ine inozvifambisa kunze kunze mumusika wemuno wekudhinda, DQ PACK yakamisa mapazi muMalaysia neHong Kong zvakateerana.ku
OEM tsika mhinduro, gadzirisa yako kurongedza.
200+ vashandi vekambani, nyanzvi R&D chikwata.
Nzvimbo yekudyara i30000+ square metres.
100+ vagadziri uye Professional tekinoroji timu.
Yedu yese yekugadzira maitiro inoitwa zvinoenderana nezvinodiwa zve ISO9001-2018, uye trademark yedu "DQ Pack CN" yave inozivikanwa inozivikanwa zita rekuchengetedza nzvimbo inotungamira mukati memisika yemumba yemalaminated flexible packaging uye minda yekudhinda.
Mabiko ebhavhadhe revashandi
Kana uine chero mibvunzo nezve zvigadzirwa kana masevhisi edu, inzwa wakasununguka kusvika kune timu yebasa revatengi. Ipa zviitiko zvakasiyana kune wese ane chekuita nemhando. Tine mutengo wakasarudzika uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvako.
Mushure mekuongororwa kwemumunda kwakaitwa nemasangano epasirese epasirese pa-saiti, DQ PACK yakasimbiswa neBV, FDA, SGS neGMC, pamwe neISO9001-2018 quality management system.
Contacts: Mai Anna
Kero: Dongshanhu Industrial Park, Chaoan District, Chaozhou Guta, Guangdong, China